NGWA NGWA TV MAKA GAM AKPORO - A GAM AKPORO - 2019
Ngwa ngwa ngwa ijikwa TV
Usoro CR2 bụ mgbanwe nke ihe oyiyi RAW. N'okwu a, anyị na-ekwu okwu banyere ihe oyiyi ndị a na-emepụta igwefoto dijitalụ Canon. Ụdị nke ụdị a nwere ozi natara ozugbo site na ihe igwefoto. A kabeghị ha edozi ma nwee oke buru ibu. Ikekọrịta foto ndị dị otú ahụ adịghị mfe, ya mere, ndị ọrụ nwere ọchịchọ ịmegharị ha ka ha bụrụ usoro dị mma karị. Ụzọ kachasị mma maka nke a bụ usoro JPG.
Ụzọ iji tọghata CR2 na JPG
Ajụjụ nke ịtụgharị faịlụ site na otu usoro na onye ọzọ na-esitekarị n'etiti ndị ọrụ. Enwere ike idozi nsogbu a n'ụzọ dịgasị iche. Ọrụ ntọghata dị na ọtụtụ usoro a na-ewu ewu maka ịrụ ọrụ na ndịna-emeputa. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ngwanrọ kpọmkwem maka nzube a.
Usoro 1: Adobe Photoshop
Adobe Photoshop bụ onye nchịkọta akụkọ kachasị ewu ewu n'ụwa. O zuru oke ka ọ rụọ ọrụ na kamera dijitalụ site na ndị nrụpụta dị iche, gụnyere Canon. Ịtụgharị faịlụ CR2 na JPG na ya nwere ike ime ya na igirigi atọ.
Mepee faịlụ CR2.
Ọ dịghị mkpa ịhọrọ ụdị faịlụ ahụ, CR2 na-esonye na ndepụta nke usoro ndabara nke Photoshop na-akwado.
Iji isi nchikota "Ctrl + Shift + S", mee mgbanwe faịlụ ahụ, na-akọwa ụdị ụdị usoro JPG a zọpụta.
Enwere ike ime otu a site na iji menu. "Njikwa" na ịhọrọ nhọrọ n'ebe ahụ Zọpụta Dị ka.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dozie akụkụ nke okike JPG. Ọ bụrụ na afọ juru gị, dị nnọọ pịa "OK".
A ghaghị ime mgbanwe a.
Usoro 2: Xnview
Xnview nwere ngwá ọrụ dị ntakịrị karịa Photoshop. Ma, n'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe dị mgbagwoju anya karị, cross-platform ma na-emeghe faịlụ CR2.
Usoro nke na-agbanwe faịlụ na-ewere ọnọdụ n'otu ụzọ ahụ dị ka Adobe Photoshop, ya mere ọ dịghị achọ nkọwa ndị ọzọ.
Usoro nke 3: Onye na-ekiri ngwa ngwa
Onye ọzọ na-ekiri nke ị nwere ike iji tọghata usoro CR2 ka JPG bụ Faststone Image Viewer. Usoro a nwere ọrụ yiri nkea na interface Xnview. Iji gbanwee otu usoro na onye ọzọ, ọ dịghị mkpa ka ị mepee faịlụ ahụ. Maka nke a, ịchọrọ:
Họrọ faịlụ achọrọ na windo nyocha ihe omume.
Iji nhọrọ Zọpụta Dị ka site na menu "Njikwa" ma ọ bụ igodo ọnụ "Ctrl + S", iji tọghata faịlụ. N'otu oge ahụ, usoro ihe omume ahụ ga-enye ozugbo iji zọpụta ya na usoro JPG.
Ya mere, na Fasstone Image Viewer, ịtụgharị CR2 na JPG dị ọbụna mfe.
Usoro nke 4
N'adịghị ka ndị gara aga, nzube bụ isi nke usoro ihe a bụ iji tọghata faịlụ mbiet site na usoro na usoro, a pụkwara ịmegharị usoro a na batrị faịlụ.
Nbudata Nbudata ihe omuma
N'ihi otu interface na-adịghị emetụ n'ahụ, ọ dị mfe ịgbanwe, ọbụna maka onye mbido.
Na onye nyocha ihe omume, họrọ faịlụ CR2 na nhazi usoro maka ntughari, nke dị na elu nke mpio, pịa na akara JPEG.
Tọọ aha faịlụ, ụzọ na ya ma pịa bọtịnụ ahụ. "Malite".
Chere maka ozi banyere mmezu nke ngbangharia ma mechi windo.
A na-eme mgbanwe ntughari.
Usoro 5: Ihe ntanetịime foto
Software a dị nnọọ ka nke gara aga. Site n'enyemaka nke "Photoconverter Standard" ị nwere ike iji tọghata ma otu faịlụ. A kwụrụ ụgwọ ahụ, a na-enye akwụkwọ ikpe ahụ naanị maka ụbọchị ise.
Download Photoconverter Standard
Mgbanwe ntughari na-ewe ọtụtụ usoro:
Họrọ faịlụ CR2 site na iji ndepụta ọdịda na menu. "Faịlụ".
Họrọ ụdị faịlụ iji tọghata wee pịa bọtịnụ ahụ. "Malite".
Chere ruo mgbe usoro ntọghata zuru, ma mechie windo ahụ.
Ejiri faịlụ jpg ọhụrụ.
Site na ihe atụ a na-atụle, o doro anya na ịtụgharị usoro CR2 na JPG abụghị nsogbu siri ike. Ndepụta nke mmemme nke a na-agbanwe usoro ọ bụla na onye ọzọ ga-aga n'ihu. Ma ha niile nwere ụkpụrụ ndị dị otú ahụ nke na-arụ ọrụ na ndị ahụ a tụlere na isiokwu ahụ, onye ọrụ ga-esikwa ike ịghọta ha dịka ịmara ihe ntụziaka ndị dị n'elu.